auto run တော်တော်များများကို သတ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
auto run တော်တော်များများကို သတ်ပေးနိုင်ပါတယ်..
ပြန်စာ - auto run တော်တော်များများကို သတ်ပေးနို
symantec9လိုချင်တယ် မဂျူနီယာ တင်ပေးပါ. ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ifile နဲ့ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်
အင်တာနက်မရတဲ့ PC တွေအတွက်တော်တော်အသုံးဝင်မှာ အခုလိုမောင်နှမတွေ သိတာလေးတွေ Share ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မဂျူ
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ TunMinnOo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, စွမ်းကမ္ဘာ, maJunior, naywinkyaw, Starfire, ZAW KAUNG LAY
auto run တော်တော်များများကို သတ်ပေးနိုင်ပါတယ&#
internet မရှိတာကြောင့် update လဲမရ virus ကိုကြောက်နေသလား
auto run virus တော်တော်များများကို သတ်ပေးနိုင်ပါတယ်..
auto run killer မလိုပါဘူး..စတစ်ထိုးတာနဲ့ သူက သတ်ပေးတော့တာပါဘဲ..
update လေးတော့ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်..
၈ျူနီယာ လက်တွေ့အသုံးပြုကြည့်ပြီး နှစ်သက်မိလို့တင်ပြရခြင်းပါ..
သူကတော့ symantec9ပါ..(10 က9လောက် မဖမ်းနိုင်ဘူး)
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, ငြိမ်းချမ်း, naywinkyaw, Starfire, thura.it, TunMinnOo, ZAW KAUNG LAY
Last edited by ဇော်ရဲပိုင်; 12-08-2009 at 05:17 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, စွမ်းကမ္ဘာ, ညီခဝေ, ဖယောင်း, chitnyimalay, maJunior, pannuko, thura.it, TunMinnOo, ZAW KAUNG LAY
13-08-2009, 11:14 AM
ကျွန်တော့်စက်ပေါ် Rar ကို Extract လုပ်တော့ Error Box ကျတယ်ဗျ ဘာများလိုအပ်ချက်ရှိလို့လဲမသိဘူး Properties ထဲမှာ Unblock ကိုလဲဖြုတ်တယ် . ရှိပီးသား Antivirus ကိုလည်း Exit လုပ်တယ်မရဘူး file has been corrupted(CRC error)လို့ပြနေတယ်
ကိုဇော်ရဲပိုင်ရဲ ifile နဲ့ပေးထားတဲ့ rar ကိုဒေါင်းပြီး Extract လုပ်တာမရတာကိုပြောတာပါ
Last edited by tu tu; 13-08-2009 at 12:01 PM.. Reason: merge posts
13-08-2009, 12:21 PM
ဂျူနီယာဆီမှာ ဖိုင် upload အတွက်အဆင်မပြေသေးတာကြောင့်
ကျွန်တော် ဖြေတာတော့ ရပါတယ်။ 7-zip သုံးပီး ဖြေကြည့်ပါလား။ http://www.7-zip.org/ အဲဒီက နေ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ရပါတယ်။ .........................................
Last edited by သက်နိုင်; 13-08-2009 at 02:44 PM..
ကိုထွန်းမင်းဦးရေ ...ကျွန်တော် ကိုယ်စက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ rar ဖိုင်ကို လုပ်ရင် မသေချာမှာ စိုးလို့ ဗျာ..ကိုယ်တိုင်တင်ပေးထားတာကိုပဲ ပြန်ဒေါင်းပြီး ဖြေကြည့်ပါတယ်...အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဗျ...
ကျွန်တော်ပုံလေးတွေနဲ့ ပြလိုက်ပါတယ်...ကိုထွန်းမင်းဦးဆီမှာ ဘာကြောင့်အက်ရာ တက်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်အထင်
ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...ဒေါင်းလုပ်ချနေတဲ့အချိန် ကွန်နက်ရှင် တစ်ခုခု ဖြစ်လို့ထင်ပါတယ်..
အယ်ရာ ကိုဒီလိုခေါ်ပါတယ်...CRC (cyclic redundancy check) ကိုထွန်းမင်းဦး ရဲ့အယ်ရာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက်ကတော့ ပြန်ပြီး re dl လုပ်ဖို့ပါပဲ...
ဒီအောက်လင့်တွေမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်...အဲ့ဒီအယ်ရာ ဖြစ်ပုံတွေကို ပြောပြထားပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
13-08-2009, 09:03 PM
Internet လဲ၇ှီပီးသား.. Antivirus လဲ၇ှီပီးသား.. အခုဟာလဲသုံးချင်တင်္ယရမလား
Find More Posts by mttwin
14-08-2009, 12:14 AM
ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် ....ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ.... သုံးချင်တယ် ဆိုရင် သုံးပါ........
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ZAW KAUNG LAY
ရသွားပါပီဗျာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော့်စက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ပါ အခုတော့အဆင်ပြေသွားပီ
Thank you for all more than I can say !
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ TunMinnOo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Window Server 2003 မှာတင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ
ပို့စ် 23 ခုအတွက် 44 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
user name တောင်းနေတယ် လုပ်ကြပါအုန်း
Thura Htet ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Thura Htet
24-01-2012, 09:32 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Feb 2016
ပို့စ်9ခုအတွက် 13 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
computer မှာ ဘာvirus ကိုက်နေမှန်းမသိဘူးဗျ
စတစ်ထိုးထိုး memory card ချိတ်ချိတ် folder name.exe ဖိုင်တွေတက်တက်လာတယ်
ZAW KAUNG LAY ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by ZAW KAUNG LAY
Auto Run Disable All Drives KTM ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 11 05-10-2011 04:35 PM